“လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ ပြောသင့်ပြောထိုက်တာတွေပြောခဲ့ရလို့ ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ ဘယ်တော့မှ နောင်တမရဘူး”ဆိုပြီး သူမရဲ့ခံယူချက်ကို ပြောပြလာတဲ့ ဖွေးဖွေး - MinSayYar
“လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ ပြောသင့်ပြောထိုက်တာတွေပြောခဲ့ရလို့ ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ ဘယ်တော့မှ နောင်တမရဘူး”ဆိုပြီး သူမရဲ့ခံယူချက်ကို ပြောပြလာတဲ့ ဖွေးဖွေး
“လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ ပြောသင့်ပြောထိုက်တာတွေပြောခဲ့ရလို့ ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ ဘယ်တော့မှ နောင်တမရပါဘူး”ဆိုပြီး သူမရဲ့ခံယူချက်ကို ပြောပြလာတဲ့ ဖွေးဖွေး။ (Zawgyi Code ဖြင့် ဖတ်မရသူများအတွက် အောက်တွင် ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖော်ပြထားရှိပါသညျ)
သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သွေးတည်းတစ်သားတည်း ပူးပေါင်းပါဝင်နေသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် ခေတ္တခဏ တ.ိမ်းေ.ရှာင်နေရသော်လည်း
လူမှုကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့် speak outလုပ်ပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကို သူမအတွက် စိတ်မပူစေဖို့ကိုလည်း အမြဲပြောနေတာပါ။ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်း ရှေ့ဆုံးကနေပါဝင်နေသူဖြစ်တာကြောင့်လည်း ပရိသတ်များက ဖွေးစိန်လေးရဲ့စိတ်ထားကို
လေးစားချစ်ခင်နေကြတာပါ။ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်းကိုလည်း အမြဲဝေမျှပေးလေ့ရှိပြီး မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း ဖွေးဖွေးရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမရင်ထဲမှာရှိတဲ့ ခံယူချက်တွေကို
ရေးသားပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ ပြောသင့်ပြောထိုက်တာတွေပြောခဲ့ရလို့ ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ ဘယ်တော့မှ နောင်တမရပါဘူး ကိုယ့် ခံယူချက် ပြည်သူ့အမှန်တရားကို တသားထဲ အမြဲသစ္စာရှိသွားပါဦးမယ်၊ နေ့တိုင်းဆုတောင်းပေးပါ့မယ်။အားလုံး ဂရုစိုက်ကြပါရှင် ဘာလိုလိုနဲ့ ပိတောက်ပန်းတွေတောင်ပွင့်တော့မယ် နွေဦးလေးတို့ရယ်။ We Must Win”ဆိုပြီးတော့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ ဖွေးစိန်ရေ. Love you.
“လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ ပြောသင့်ပြောထိုက်တာတွေပြောခဲ့ရလို့ ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ ဘယ်တော့မှ နောင်တမရပါဘူး”ဆိုပြီး သူမရဲ့ခံယူချက်ကို ပြောပြလာတဲ့ ဖွေးဖွေး။
သရုပျဆောငျ ဖှေးဖှေးကတော့ မွနျမာနိုငျငံတှငျ လကျရှိဖွဈပေါျနတေဲ့ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော ပွညျသူတှနေဲ့အတူ တဈသှေးတညျးတဈသားတညျး ပူးပေါငျးပါဝငျနသေူတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ အခွအေနအေရပျရပျကွောင့ျ ခတေ်တခဏ တ.ိမျးေ.ရှာငျနရေသောျလညျး
လေးစားချစ်ခင်နေကြတာပါ။ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်းကိုလည်း အမြဲဝေမျှပေးလေ့ရှိပြီး မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း ဖွေးဖွေးရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမရင်ထဲမှာရှိတဲ့ ခံယူချက်တွေကိုရေးသားပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ ပြောသင့်ပြောထိုက်တာတွေပြောခဲ့ရလို့ ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ ဘယ်တော့မှ နောင်တမရပါဘူး ကိုယ့် ခံယူချက် ပြည်သူ့အမှန်တရားကို တသားထဲ အမြဲသစ္စာရှိသွားပါဦးမယ်၊ နေ့တိုင်းဆုတောင်းပေးပါ့မယ်
အားလုံး ဂရုစိုက်ကြပါရှင် ဘာလိုလိုနဲ့ ပိတောက်ပန်းတွေတောင်ပွင့်တော့မယ် နွေဦးလေးတို့ရယ်။ We Must Win”ဆိုပြီးတော့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ ဖွေးစိန်ရေ. Love you.
ကလေးလဲ လျော့တွက်လို့မရပါ ကလေးမလို့ မတင်ချင်ပေမယ့်လဲ သတိထားလို့ရအောင်ပါ